Ciidamada xasillinta iyo kuwa militeriga oo markale ku dagaalamay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada xasillinta iyo kuwa militeriga oo markale ku dagaalamay magaalada Muqdisho
Ciidamo ka tirsan kuwa xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa militeriga Soomaaliya ayaa maanta dagaal culus ku dhexmaray isgoyska Carweydka ee ku yaalla xaafadda Baar Ubax ee degmada H/wadaag.
Dagaalkaan oo noqonaya kii labaad oo ciidamadaasi ku dhexmara magaalada Muqdisho ayaa sida la sheegay yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta ammaanka Muqdisho ay isku dayeen inay hub ka dhigis ku sameeyaan askar ka tirsan ciidamada militeriga Soomaaliya.
Askarta ka tirsanaa ciidanka militeriga Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ka biyo diideen in hubka ay wateen laga qaado, iyadoona markaasi kadib ay halkaasi ka bilaabatay israsaaseyn aad u xoogan.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku geeriyootay labo qof uu midkood ahaa askari, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay.
Dhinaca kale, ciidanka xasillinta ammaanka magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay haatan baadi-goob ugu jiraan askartii ka tirsanayd ciidanka militeriga Soomaaliya ee iyaga rasaasta kala hortimid.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada xasilinta ammaanka magaalada Muqdisho iyo kuwa militeriga ay sidaan oo kale ugu dagaalameen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkaan soo noq-noqday ayaa imaanaya xilli dhawaan golaha wasiiradda ee xukuumadda Soomaaliya ay soo saareen go’aano kala duwan oo ku saabsan ammaanka magaalada Muqdisho.
Go’aamadaasi ayaa kala ahaa in magaalada Muqdisho aan lagu dhex arki karin askari hubeysan oo aan ka tirsaneyn ciidamada ammaanka iyo in mas’uuliyiinta dowladda ee la illaaliyo aanay wadan karin in ka badan 4 askari iyo 4 qori oo AK-47 ah.